कथित उच्च जातिकी युवतीसँग प्रेमविवाह गर्ने दलित युवकको हत्या — JagaranMedia.Com
मजदुरहरुलाई छाक टार्न धौधौ,राहत नपाएको गुनासो
दलित आन्दोलनका नेता आउजीको निधन
कथित उच्च जातिकी युवतीसँग प्रेमविवाह गर्ने दलित युवकको हत्या
एजेन्सी प्रकाशित : २०७६/३/२५ गते
भारतको गुजरातमा रहेको अहमदाबादमा २५ वर्षीय एक दलित युवक र उनकी पत्नीलाई नातेदारहरूले हत्या गरेका छन् । पत्नी कथित उच्च जातकी हुन् । प्रहरीका अनुसार, सोमवार राति हरीश सोलंकी आफ्नी पत्नी उर्मिलाबेनलाई लिन ससुराली गएका थिए । वरमोर गाउँमा रहेको ससुरालीमा उनको हत्या भयो ।
पत्नी दुई महिनाकी गर्भवती छिन् । उनी कथित उच्च जाति दरबार समुदायकी हुन् । सोलंकीले उर्मिलाका मातापिताको इच्छाविपरीत केही महिनाअघि विवाह गरेकी थिइन् । विवाहपछि उनले उर्मिलालाई कच्छ जिल्लाको गान्धीगाम लगेका थिए ।
उर्मिलाका नातेदारहरूले सोलंकीको घर गएर केही हप्तापछि फर्काइदिने भन्दै उर्मिलालाई लिएर गएका थिए । तर उनीहरूले दुई महिनासम्म पनि नफर्काएपछि सोलंकीले ससुराली जाने निर्णय लिए ।
उनले महिला हेल्पलाइन अभयम १८१ को सहायता लिए अनि हेल्पलाइनकै गाडी चढेर वरमोर गए । सोलंकी गाडीभित्रै बसे अनि हेल्पलाइन सेवाका अधिकारीहरू उनको ससुरलाी घरभित्र गएर उर्मिलालाई फर्काउनुस् भनी सम्झाउन थाले ।
उर्मिलाका नातेदारले सोलंकी अधिकारीहरूसँग छन् भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरू घरबाहिर आएर सोलंकीमाथि धारिलो हतियारले आक्रमण गरे । प्रहरीका अनुसार, आक्रमणमा सोलंकीको शिर र अन्य अंगमा चोट लाग्यो र उनको मृत्यु भयो ।
अभयमको गाडी पनि आक्रमणमा क्षतिग्रस्त भएको अनि सोलंकीसँग गएका अधिकारीहरू चाहिँ बाँचेको बताइएको छ । आरोपितहरू घटनापछि फरार छन् र प्रहरीले उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ ।
काला : एक विद्रोहचेत
धर्मका नाममा विभेद हुन थालेपछि भारतका दलितहरु धर्म त्याग्दै
अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई २ लाख ५० हजार
भारतीय युवतीले बनाइन् बलात्कारबाट बचाउने पेन्टी !
दलित आन्दोलनका नेता उदयराम आउजीको ८५ वर्षको उमेरमा बुधवार धनगढी उप महानगरपालिका बंगरामा रहेको आफ्नै निवासमा निधन भएको छ ।...
घरमा खाने खर्च छैन, छोराछोरी भोक लाग्यो भन्छन कसरी छाक टार्ने हो ? कसरी बाच्ने हो ? यो दुखेसो हो...
कोरोना भाईरको संक्रमण नफैलियोस भनेर अहिले सबै जना घरमै बसेका छौ । कतिपय कार्यालय,स्कुल,कलेहरु बन्दछन । घरमा सबै परिवार जम्मा...
Katwal Radio Magazine 2076-12-19